Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Asongadina: Oumar Dembélé · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Septambra 2011 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra Thalia Rahme Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Antsafa, Ségou Villages Connection, Rising Voices
Taorian'ny tafatafa tamin'i Yaya Coulibaly , Rising Voices dia te-hampahafantatra anao an'i Oumar Dembélé, mpampianatra any amin'ny sekoly fanabeazana fototra ao amin'ny sekolim-bahoaka fanabeazana fototr'i Zambougou ao amin'ny tanànan'i Cinzana-Gare, ao amin'ny Faritr'i Ségou any Mali . Oumar koa dia mpikambana amin'ny tetikasa Ségou Villages Connection  Fifandraisan'ny Tananan'i Ségou, tohanan'ny RV, izay nanomboka ny taona 2011. Ny maha mpampianatra dia manome tombony ho an'i Oumar noho izy efa zatra mifandray amin'ny mpianany sy ny fianakavian'izy ireny. Ary hampiasainy izany talenta amin'ny serasera izany rehefa mifandray amin'ny hafa, ka amin'ity tranga ity, amin'ny mponina ao an-tanàna. Nangoniny ny tantaran'izy ireo ary nalefa tamin'ny SMS tany amin'ny mpiandraikitra ny tetikasa, Boukary Konaté, izay namoaka izany tao amin'ny bilaogin'ny Ségou Infos [fr] . Ankoatry ny asa sy ny fianarana ny teknolojia, tia manao fanatanjahan-tena sy mamaky boky koa izy. Tsy tia mipetrapetraka izy, ary mandritra ny fialantsasatry ny sekoly dia miasa any an-tanimboly izy.
Amin'ity tafatafa tanaty mailaka ity, Oumar izay mibitsika ao amin'ny @D1Oumar , mizara amintsika ny fialamboliny, ny tontolo androny miaraka amin'ilay tetikasa, ary ny fiantraika tsaran'izany ho valin'ny fiofanana.
Oumar Dembélé – solotenan'ny Vohitr'i Ségou ao Zambougo
Rising Voices: Tantarao anay hoe ny momba ny tontolo andronao miaraka amin'ilay tetikasa amin'ny Vohitr'i Ségou. Inona no antony nidiranao? Inona no andraikitrao ao anatin'ilay tetikasa?
Oumar Dembélé: Niditra tao amin'ny fikambanana aho noho Andriamatoa Boukary Konaté – @Fasokan  nandritra ny fivahinianany tao amin'ny Cinzana-Gare . Nanolo-kevitra ahy izy fa ny fidirako amin'io tetikasa io dia mandefa vaovao amin'ny alalan'ny SMS, avy eo dia tsy maintsy manao fiofanana amin'ny aterineto ao amin'ny Dioro . aho. Nahasarika ahy ilay tetikasa satria voamariko fa tsy dia miresaka betsaka ny zava-miseho any amin'ny faritra ambanivohitra isika. Tsy dia fantatry ny haino aman-jery matetika ny zavatra tena misy any amin'ny tontolo ambanivohitra.
RV: Ahoana no fomba hanangonanao ireo vaovao? Tena vonona tokoa ve ny vahoaka manome vaovao ho anao?
OD:Ny fifandraisana amin'ny olona aloha hatreto dia tsy misy olana, hatramin'ny nampianarako, dia haiko ny fomba hanatonana ny olona.
RV: Mpampianatra any an-tsekoly ianao, hatraiza no eritreretinao fa ho tombony azon'ny asanao amin'ny fiofanana azonao? Ahoana no hieritreretanao fa afaka hanome tombony ny mpianatrao sy ny mpiara-miasa aminao avy amin'izany ianao?
OD : Mazava ho azy, efa imbetsaka aho no manontany ny tenako toy izany. Mandray anjara amin'ny fanombohan-javatra tsara isika nefa tsy ampy ny fitaovana hametrahantsika an'izany. Efa miezaka mafy aho na dia araka ny fananako fotsiny aza ary manana mpiara miasa roa aho izay tena manao ny ainy tsy ho zavatra koa. Heveriko fa ho tratra ny tanjonay miaraka amin'ny fahafoizan-tena sy ny fandraisana anjara avy amintsika tsirairay.
RV: Segou Infos dia nateraky ny tsy fahampiana fifandraisana na serasera ao Mali, indrindra eo amin'ireo tanan-dehibe ( indrindra ao Bamako renivohitra) ary ny fiarahamonina any ambanivohitra. Ahoana no hieritreretanao fa ity fandraisana andraikitra ity dia mety afaka manatsara sy mampandroso mba hananàna fivelarana lehibe?
OD: Raha tsy misy fampitomboana ireo ezaka samihafa amin'ny toro-hevitra sy fitaovana izay hanampy anay hanampariahana sary ary vaovao any amin'ny aterineto dia tsy handroso ity fandraisana andraikitra ity. Teneniko hoe sary satria ny sary no manome antsipirihany betsaka kokoa. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hampifandraisana ny tontolo ambanivohitra amin'ny zava-miseho ka mba hanana fomba fijery mitovy amin'ny sehatra rehetra. Raha ny mpandray anjara rehetra no mahatontosa feno ny andraikiny avy, dia ho lasa lavitra ny Segou Infos.
RV: Afaka soritsoritanao ve hoe ahoana ny fiainana ato amin'ny faritr'i Ségou?….
OD: Ségou dia tanàna manan-tantara miaraka amin'ny mahery fo toa an'i Binton Coulibali , N’Golo Diarra , Da Monzon Diarra , sns. Izy dia fifangaroan'ny foko Bambara, De Bozo, Sarakolé, Peulh ary foko hafa. Ny fambolena, fiompiana omby, fiompiana, fanjonoana, ary varotra no foto-pivelomana misy ao, ka ny fambolena no tena mibahan-toerana sy tena zava-dehibe.
Tsena ao amin'ny Faritr'i Ségou – Sary avy amin'ny bilaogin'ny Segou Infos.
RV: Misy zavatra tianao hanampiana ve ho teny farany ho an'ny mpamakin’ ny Rising Voices avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao?
OD: Voalohany, mankasitraka an'i Boukary Konaté izay nanolo-kevitra ahy tamin'ity fandraisana anadraikitra ity aho. Miantso ny mpamaky ny Global Voices mba ho avy hitsidika an'i Ségou mba hahafantatra zavatra maro izay mbola tsy noresahana matetika.
Milalao Tamtam. Sary an'i Ségou Infos
Tafatafa natao voalohany tamin'ny teny Frantsay
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/05/21621/
 Faritr'i Ségou any Mali: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/S%C3%A9gou_%28region%29